Ocean House at Watch Hill hotel: Grand staircases leading to nowhere | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Ocean House na Watch Hill nkwari akụ: Nnukwu steepụ na-eduga enweghị ebe
Ocean House na Watch Hill nkwari akụ
Ocean House bụ nnukwu ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ nke mmiri Victorian nke e wuru na 1868 na Bluff Avenue na mpaghara Watch Hill nke Westerly, Rhode Island
Oceanlọ Osimiri Osimiri mbụ bụ ebe etiti dị na District Watch Hill, nke edepụtara na National Register of Places Historic Places.
Emechi ụlọ nkwari akụ mbụ ahụ gụnyere enweghị ihe ọgbara ọhụrụ ọhụhụ, ọnọdụ ya na-emebi emebi, na nnabata usoro iwu ụlọ ugbu a.
Nnukwu steepụ na-eduga na ebe ọ bụla, mmiri ozuzo na-asọkwa mgbidi ahụ.
Hotellọ nkwari akụ mbụ nke 1868 mechiri na 2003; e kwusiri ya na 2005, ma ụlọ ọrụ ọhụrụ meghere na 2010 n'otu saịtị ahụ nke jidere ọtụtụ ụdị na ụdị ọdịdị mbụ, yana aha mbụ. Ma ndị mbụ na nwughari ya e kwuru maka ha wuru ewu Victoria ije na pụrụ iche odo siding.
Oceanlọ Osimiri mbụ bụ ụlọ nkwari akụ ikpeazụ nke oge Victorian na agwaetiti Rhode Island.
E wuru Ocean House na 1868. Ọ pere mpe karịa nke ọzọ hotels dị na Watch Hill, mana ọ gbasaa na ọtụtụ mgbakwunye na afọ. Oceanlọ Osimiri Osimiri mbụ bụ ebe etiti dị na District Watch Hill, nke edepụtara na National Register of Places Historic Places.
Na Machị 2004, Girouard Associates nke New Kenan, Connecticut, zụrụ ụlọ ọrụ ahụ n'aka ndị nketa nke ezinụlọ Louis D. Miller, bụ ndị nweburu ụlọ nkwari akụ ahụ kemgbe 1938. Girouard Associates bu n'obi imebi Ocean House ma wuo nnukwu ụlọ ise nke oke osimiri, mana ngagharị iwe sochirinụ. Achọtara onye ohuru ohuru n'ikpeazụ, ma ka echekwara mmụọ nke ụlọ mbụ ahụ, ụlọ ahụ abụghị.
Ihe ndị metụtara metụtara mmechi nke Houselọ Osimiri mbụ ahụ gụnyere enweghị ihe ọgbara ọhụrụ ọhụhụ, ọnọdụ ya na-adabaghị adaba, na erubere iwu iwu ụlọ ugbu a anya. Oceanlọ Osimiri originallọ mbụ na-arụ ọrụ n'oge oge, na-emeghe ihe dị ka ọnwa atọ n'afọ, ụlọ ahụ enweghịkwa kpo oku, ntụ oyi, na usoro ikuku. N'afọ ndị ikpeazụ nke ọrụ ya, a naghị eji ala elu abụọ kachasị elu ma naanị ụlọ 59 nwere ike ịrụ ọrụ na nke mbụ ya bụ 159. facilitylọ ọrụ merela agadi enweghị ihe ndị dị mkpa, ọrụ ọrụ, ihe ndị a chọrọ, chọrọ ịnweta nkwarụ nkwarụ, na ebe a na-adọba ụgbọala iji zute koodu nke oge a. Otu akwụkwọ akụkọ kọwara ọnọdụ ikpeazụ ya, sị: “Akwa steepụ adịghị ebe ọ bụla. Mmiri mmiri ozuzo na-asọbata na mgbidi ma na-agbadata ọwa mmiri. Igwe osisi oak ahụ agbajiela. ”
Buildinglọ ahụ dị afọ 138 ekwenyeghị na iwu ụlọ na nchekwa ndụ ugbu a. Emebiwo osisi ya site na itinye igwe eletrik, gas, na pọmpụ mmiri na-enweghị oke, yana nhazi ọzọ nke ụlọ ndị gụnyere ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe. Emegharịrị ọkụ ọkụ ọkụ nke Rhode Island ma tinyekwuo ya ike na ọkụ ọkụ ọkụ abalị 2003 Station, na-enye enweghị ike enweghị oke na Ocean House. Nkwenye na ụkpụrụ nchekwa ndụ ugbu a, gụnyere ndị maka windo windo windo nwere okpokolo agba ọhụrụ, ntọala ohuru nke nwere eriri nchara nchara niile, na-ewepụ agba agba na ime mpụga niile, na iwepụ ihe nkedo dị n'ime nke chọrọ mmebi nke imecha ime.
N’afọ 2004, ekweghị ka Ocean House meghee n’ihi ụkọ koodu; hotellọ nkwari akụ mbụ ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ na 2003 ma ree ya. Ndị obodo ahụ mụtara na Machị 2004 na onye nrụpụta si n’obodo na-eme atụmatụ imebi Ocean House ma wuo ụlọ ise na ya, yabụ ndị nhazi malitere mkpọsa iji chekwaa ụlọ ahụ ma chekwaa ohere ịnweta oke osimiri na osimiri. Ndị nhazi a gụnyere ndị nnọchi anya si Preserve Rhode Island, Rhode Island Historical Preservation, na Heritage Commission, yana National Trust. Achọpụtara onye ọzọ zụtara ya nke weere ya na akụnụba ya na n'ụzọ anụ ahụ agaghị ekwe omume iji mee ka ụlọ ahụ rụọ ọrụ yana koodu kwekọrọ, mana o kwere nkwa na ya ga-ewughachi ya site na ala. Waslọ mbụ ahụ kwaturu ma wuo ebe ọhụrụ na ebe ahụ.
Ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ guzogidere nguzogide nke Ocean House, ma ha rụrụ ụka nke ọma maka nwughari. Ha tụrụ aro ụlọ a rụrụ nke mbụ Houselọ Oké Osimiri dịka ọ bụ zenith ya, ihe dị ka 1908. Nke a ga-enye ụlọ nkwari akụ nwere ọnụ ụlọ 49 kwesịrị ekwesị n'ogologo ya n'okporo ámá ndị dị ya nso, ebe ọ na-agbasapụ n'akụkụ ụsọ osimiri ebe a ga-enwe ebe obibi 23. Ọ ga-emekwa ka ọ nwee ike ịnwe ihe eji arụ ọrụ yana ọrụ ọrụ nwere ike ime ka ọrụ ahụ rụọ ọrụ na akụnụba.
Oceanlọ Osimiri originallọ mbụ mebiri na Disemba 2005 na ụlọ ọrụ na-esote mepere na 2010.
Ihe ohuru ohuru bu 50,000 square kariri nke mbu na square 156,000. Ọ na-ewughachi ọtụtụ ihe mbụ ma na-eweghachi ụfọdụ nkọwa mbụ nke ewepụrụ n'oge ọrụ na-aga n'ihu nke ụlọ ọrụ ahụ, dị ka ụlọ mbụ mansard na ebe a na-anabata ndị ọbịa. Ọ na-etinyekwa ihe ndị ọhụrụ, gụnyere ụlọ ndị dị n'okpuru ala na nku abụọ ọhụụ na-agbatị site na isi ụlọ, nke na-echebekwa ebe ndị agbata obi ha na ọrụ ụlọ nkwari akụ.
Edere ihe owuwu mbụ ahụ, wee chekwaa akụkụ na elu dị elu, gụnyere nha na ọnọdụ nke windo. Ejiri salvage nke ụlọ mbụ ahụ wee kee ya, ọ rụkwara ogidi, isi ya na osisi ya. Akụrụngwa n'ime iru mmadụ bụ osisi mgbe ị na-akọwapụta ihe na-esiteghị na ya bụ nke ihe eji arụ ọrụ nke dị mfe iji debe.
Facilitylọ ọrụ ọhụrụ ahụ nwere ọnụ ụlọ ndị ọbịa 49 na nnukwu ụlọ obibi 23 nke ụlọ obibi yana ọnụ ụlọ nzukọ, spa, lap, ọdọ mmiri, ebe mgbatị ahụ, na ụlọ nri. Imewe ahụ na-anabata ọrụ ndị dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ: kichin nke oge a, ebe a na-ebunye ụgbọ mmiri, ime ụlọ eji arụ ọrụ, ihe achọrọ ọkụ (dịka akwa steepụ), yana ụlọ ọrụ ndị ọrụ.
Ocean House at Watch Hill hotel: Grand staircases leading to nowhere 3
Stanley Turkel edepụtara dị ka 2020 Historian of the Year site na Historic Hotels of America, mmemme mmemme nke National Trust for Historic Preservation, nke a na-akpọbu aha ya na 2015 na 2014. Turkel bụ onye mgbasa ozi ụlọ oriri na ọ publishedụ -ụ na-ebipụta na United States. Ọ na-arụ ọrụ ịgba izu n'ụlọ nkwari akụ ya na-eje ozi dị ka onye akaebe mara ama n'okwu metụtara ụlọ nkwari akụ, na-enye njikwa akụ na nkwanye ikike ụlọ oriri na ọ hotelụ. Akwadoro ya dika Master Hotel Supplier Emeritus site na Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association. [email protected] 917-628-8549
Nnukwu ndị America Hoteliers: Ndị ọsụ ụzọ nke ụlọ ọrụ nkwari akụ (2009)
Wuru Iji Ikpeazụ: Hotels 100+ Afọ-Old Hotels na New York (2011)
Wuru Oge Ikpeazụ: Hotels 100+ Afọ-Old East nke Mississippi (2013)
Malọ nkwari akụ: Lucius M. Boomer, George C. Boldt, Oscar nke Waldorf (2014)
Nnukwu ndị America Hoteliers Mpịakọta 2: Ndị ọsụ ụzọ nke ụlọ ọrụ nkwari akụ (2016)
Wuru Iji Oge Ikpeazụ: Hotels 100+-Old Hotels West nke Mississippi (2017)
Hotel Mavens Mpịakọta 2: Henry Morrison Flagler, Henry Bradley Osisi, Carl Graham Fisher (2018)
Nnukwu ụlọ oriri na ọ Hotelụ Americanụ nke ndị America nke Mpịakọta I (2019)
Malọ nkwari akụ: Nke 3: Bob na Larry Tisch, Ralph Hitz, Cesar Ritz, Curt Strand
Akwụkwọ ndị a niile nwere ike ịnye iwu site n'aka Onye edemede site na ịga www.stanleyturkel.com na ịpị aha akwụkwọ ahụ.